Isbahaysiga Xashiishka Cusub ee Loogu Bixin Lahaa Sharciyeynta Federaalka • Dawooyinka Inc.eu
Isbahaysiga xashiishadda cusub ee sharciyeynta federaalka
Kooxda ka tirsan isbahaysiga xashiishadda wuxuu ka kooban yahay wakiillo ka socda aalkolada, tubaakada iyo qaybaha caymiska. Boorarka iyo istiikarada waxaa loo arkaa sharciyeynta marijuana ee Washington, DC iyadoo ujeedadu tahay saameyn ku yeelashada siyaasada xashiishadda
1 Isbaheysiga Siyaasadda Cannabis, Waxbarashada iyo Xeerarka
2 Maandooriyaha xashiishka
3 Isku soo wada duuboo xisbiyada isbahaysiga xashiishadda ee ku dhex jira warshadaha xashiishadda
Isbahaysi cusub oo xashiishad ah oo ka kooban shirkado badan oo qaran, oo ay ku jiraan kuwa sameeya tubaakada iyo aalkolada ayaa la bilaabay toddobaadkan. Iyada oo loo maleynayo in sharciyeynta federaalka ay tahay lama huraan, kooxdu waxay diiwaangelineysaa koox khubaro ah oo ku xeel dheer arrimaha xashiishadda si ay u hagaan dadaalkooda.
Isbaheysiga Siyaasadda Cannabis, Waxbarashada iyo Xeerarka
Isbaheysiga Siyaasadda Cannabis, Waxbarashada iyo Xeer-dejintu waxay qorsheynayaan inay diiradda saaraan doodaha siyaasadda federaalka iyo gobolka. Meelahaas siyaasadeed waxaa ka mid ah walaac ku saabsan nabadgelyada guud, ka hortagga dhalinyarada, helitaanka dadka laga tirada badan yahay ee warshadaha iyo heerarka qaran ee baaritaanka wax soo saarka iyo sunta cayayaanka. Kooxdu waxay qorsheyneysaa inay uruuriso xogta iyo cilmi baarista ayna sii deyso waraaqo cad oo ku saabsan arrimahan siyaasadeed ee loo adeegsan karo in lagu ogeysiiyo sharci dajiyayaasha.
Andrew Freedman, agaasimaha fulinta ee isbahaysiga ayaa yiri "waxaa jira daraasiin su'aalo ah oo aan wali laga jawaabin." Kuwaan midkood ayaa ku filan inay dib u dhigto sharciyeynta. Marka waa inaan si hufan uga jawaabnaa dhammaan su'aalahan furan. ” Hadda waxaa jira 16 dowladood oo meel mariyey sharciyeyn buuxda oo marijuana ah, halka 26 kale ay leeyihiin suuqyo caafimaad oo sharci ah oo keliya. Hogaamiyaha Senate-ka Chuck Schumer wuxuu aqbalay sharciyeynta marijuana wuxuuna ugu yeeray mudnaanta Koongaraskan. Dhanka kale, warshaduhu way kobcayaan - iibka sharciga ah wuxuu ka badnaa $ 20 bilyan sanadkii hore, sida laga soo xigtay New Frontier Data, boqolkiiba 50 ayaa ka booday 2019.
Waxyaabaha hadda ka kooban isbahaysiga wuxuu ka kooban yahay shirkadda weyn ee Tubaakada 'Altria', shirkadaha waaweyn ee biirka ah ee loo yaqaan 'Constellation Brands' (Corona, Modelo) iyo Shirkadda Molson Coors Beverage Company, oo ah laba urur oo wax ka iibsada xaafadaha qaranka, Golaha Wakiilada Caymiska & Dullaaliinta iyo Shirkadda The Brink's Company.
Qaar badan oo ka mid ah shirkadahaani waxay horeyba u leeyihiin dano muhiim ah warshadaha xashiishadda waxayna ka faa'iideysan karaan isbeddelada siyaasadeed ee federaalka. Constellation waxay leedahay 39 boqolkiiba shirkadda weyn ee Cannabis ee Canopy Growth Corp. Altria waxay iibsatay $ 2018 bilyan oo saamiga shirkadda xashiishadda ah ee Cronos Group sannadka 1,8 waxayna u ololeeysay gobolka Virginia ee dhowaan la ansixiyay biil sharciyeynta marijuana. Intaa waxaa sii dheer, Constellation iyo Molson Coors labaduba waxay soo saaraan cabitaanno CBD- faleebada wadnaha
Isbahaysigu wuxuu kaloo leeyahay Xarun heer sare ah oo ay ka kooban yihiin khubaro ay ka mid yihiin ganacsade xashiishad ah iyo madaxweynihii hore ee Minority Cannabis Business Association Shanita Penny, Staci Gruber oo ka tirsan Isbitaalka McLean iyo Jaamacadda Harvard, Brandy Axdahl oo ka tirsan aasaaska hormarinta mas'uuliyadda aalkolada, iyo John Hudak oo ka socda Machadka Brookings.
Isku soo wada duuboo xisbiyada isbahaysiga xashiishadda ee ku dhex jira warshadaha xashiishadda
Isbahaysiga cusub wuxuu isu dheelitirayaa laba dhinac: shirkado waawayn oo danaynaya siyaasada iyo xeerarka xashiishadda, iyo khubaro aan weli qancin ama aan ku qanacsanayn baaxadda weyn sharci-dejinta iyo helitaanka sinaanta cawska.
Penny waxay sheegtay inay aqbashay casuumaada inay ku biirto maxaa yeelay waxay siineysaa barxad xoogan oo saameyn ku yeelata siyaasada. Waxay rajeyneysaa inay noqoto gole ay kooxaha inta badan aan ka mid ahayn doodaha sharciyeynta ay ka wada hadli karaan aagagga siyaasada xashiishka ee ay ku leeyihiin fikradaha adag, sida marin u helista dhalinyarada ama dib u habeynta cadaaladda dambiyada.
Akhri wax dheeraad ah politico.com (Source, EN)
5 farqi ayaa u dhexeeya CBD iyo THC
Cannabis waa warshad caan ah oo noqon karta aragti la arko ama xitaa ...
Kaydka xashiishka ayaa kor u kacaya ka dib markii uu guuleystay madaxweynaha cusub ee Biden, rajada laga qabo sharciyeynta iyo natiijooyinka adag
Nofeembar waxay keeneen saddex laab laab war weyn oo loogu talagalay keydka xashiishadda: dhowr gobol ayaa sharciyeeyay isticmaalka marijuana madaddaalada, ...